kushishino yezihlangu - Digital Manufacturing Co., Ltd.
SL 3D ZESISHICELELI
SLA Hi Uthotho
SLA S Uthotho
laser ephathwayo 3D scanner
ukukhanya 3D scanner yokwakhiwa
TEMPERATURE EZIPHAKAMILEYO ukumelana nentlaka-T1120
FDM 3D Umshicileli WENZE Series
FDM 3D Umshicileli we-DQ Uthotho
FDM 3D Umshicileli we-3DDP Uthotho
UKUHLAZIYWA KOKUFUNDA KWE-DATA
model / iimveliso seIRT
isicelo ukuskena 3D
zezinto Cultural lenguqu
uyilo Reverse / nokumodela
Inkonzo yokuprinta ye3D
3D yoshicilelo kuqinisa mveliso wezihlangu
A inyanda izihlangu Nike eprintiweyo yi kumshicileli SL 3D e Shanghai flagship kwiziko lokulondoloza
Kwiminyaka yakutshanje, 3D technology yoshicilelo kuthe singene kwinkalo shoemaking. Ukususela ezibolile yezihlangu kanban ukuba sanding ezibolile yezihlangu, ngumngundo imveliso, kwaye nkqu kweentende yezihlangu agqitywa, kubonakala ukuba 3D technology yoshicilelo kuyabonakala yonke. Nangona 3D eshicilelweyo izihlangu nabangekafumani yathandwa ezivenkileni yezihlangu, ngenxa amandla kuyilo kunye nokwenziwa namathuba zezihlangu 3D eziprintiweyo, abaninzi iingxilimbela yezihlangu ekhaya nakumazwe aphesheya bebesoloko iinzame kweli candelo iteknoloji asakhasayo eyenziwe kwiminyaka yakutshanje.
Ukukhawulezisa ukuqinisekiswa ukuyila ucuthe umjikelezo yophuhliso
Xa kumabakala okuqala yoyilo izihlangu, iisampulu zezihlangu sokubumbela ngokuqhelekileyo kusetyenziswa izixhobo zemveli ezifana lathes, drill amasuntswana, oomatshini Ukubetha, kunye noomatshini udini. Inkqubo yemveliso ixesha kakhulu elide naqhama ixesha elifunekayo ngokuyila kwaye lingqinisisa ngumngundo wezihlangu. Ngokwahlukileyo koko, 3D yoshicilelo nga ngokuzenzekelayo yaye ngokukhawuleza ukuguqula iisampuli yezihlangu sekhompyutha imifuziselo, leyo weyisayo kuphela umda seenkqubo zemveli, kodwa ulibuyele ingqiqo yokuyila ngcono, aze ancedisane novavanyo imveliso kunye kahle.
Unlimited ngu isakhiwo, kahle eliphezulu kunye nezimo
Ngokusekelwe iingenelo yemveliso digital okukhawulezayo, 3D ubugcisa bokuprinta kungaphelelanga yi isakhiwo, ngokuvumela abayili bamajikazi ukuba yilo ukhanyidelo lwabo. Ukongeza, 3D bhetyebhetye yoshicilelo iququzelela abayili bamajikazi ukuba ulungise liqulunqa ukunciphisa iindleko sikubeke ngenxa ngumngundo kwakhona.
yoshicilelo 3D alows ukuba posibility of ulwenziwo personalilzed
kulindeleke ukuba izihlangu 3D eprintiweyo kungenziwa ngokwakho costomization for abangenanto yakwenza. Ngokuqhelekileyo, ngenxa yeendleko iinkqubo, izinto, uphando kunye nophuhliso, ixabiso weembadada elicwangcisiweyo iphezulu kakhulu kunaleyo yezihlangu zesiqhelo. 3D yoshicilelo kunciphisa iindleko ngumngundo, yayinqamlela umjikelo zophuhliso yaye zibonelela ukusetyenziswa eziphathekayo. Kwixesha elizayo, kulindeleke ukuba ukuhlangabezana neemfuno ngamnye labathengi kwinkqubo yemveliso gama ukunciphisa iindleko zemveliso kwamashishini.
Misela abathengi database ulwazi unyawo
3D ushicilelo isekelwe kwi-3D ulwazi data ngumzekelo izingqi umthengi lowo, uze usebenzisa umshicileli 3D ukuvelisa insole, ekuncothukeni kweentende zeenyawo kunye nezihlangu ehambelana ngokupheleleyo imilo unyawo loMthengi, sikhawulezisa nokubunjwa komgca lento, kwaye bephaka practical usebenzisa eqongeni wena of nezihlangu le.
3D abashicileli ekucetyiswa
ulwenziwo lubelolwakho: 3DSL-360 & 3DSL-450
imveliso batch Small: 3DSL-600 & 3DSL-800
Lwedilesi: No. 8666 Hunan Highway, Shanghai, China.
Ityala lesicelo sezonyango: Sebenzisa i-3D printi ...
Umzobo omkhulu we-3D wokushicilela-umfanekiso weVenus
3D yoshicilelo-ukusetyenziswa ngqo iindawo
Imodeli yokubonisa yokushicilela ye-3D
3D yonyango yoshicilelo
Thumela i-imeyile US & Fumana PRICE ZOMNTU
© Copyright - 2010-2019: Onke amalungelo agciniwe. Products Guide - iimveliso lifakwe - Tags Hot - Sitemap.xml - AMP Mobile